GOOBIDDA IYO DARYEELIINTA GERANIUM EE DALKA: WAA SUURAGAL SI AY U KORAAN UBAX DIBEDDA AH, SIDA LOO DHAQAAJIYO DHERIGA SI DHUL FURAN, IYO SIDOO KALE SAWIRRO NOOCYO CAGAARAN IYO KUWO KALE - SOOSAARKA DALAGGA
Noocyada beeraha geranium ee dalka. Talooyin daryeel, sawir ubax ah
Geranium - warshad si xor ah ugu kori karto xayawaanka daaqada dheriga, iyo hawada furan. Inta badan beeralayda ubaxa leh dacha waxay qaadanayaan dhirta quruxda badan oo ay ku beeranayaan beerta. Laakiin ka hor inta laga beerto gogosha, waa lagama maarmaan in la doorto goobta saxda ah iyo ciidda.
Geranium wuxuu kobcin karaa labadaba hooska iyo qorraxda, taas oo ku xidhan noocyada kala duwan, laakiin gabi ahaanba noocyada dhirta oo dhan waa sida ciidda iftiinka leh ee loo maro hawada iyo biyaha.
Suurtogal ma tahay in laga baxo dibadda?
Tijaabi in ay suurtagal tahay in lagu beero geedka meel furan. Dhab ahaantii noocyada kala duwan ee geraniums dareemayaan weyn ee berrin bannaan., kaliya ayaa loo baahan yahay in si sax ah loo doorto. Waxay u muuqataa mid fiican in qaabeynta muuqaalka. Warshadkan waxaa badanaa loo isticmaalaa sida dhexdhexaadin siman oo ka dhexeeya xoortay, kuwaas oo ku kala duwan midabka iyo qaabka duurjoogta.
Xaqiiqo xiiso leh! Geranium ee bannaanka u furan kaalin ma aha oo kaliya qurxinta dabeecadda. Xaqiiqdu waxay tahay in nidaamka xididka geedka ay tahay mid aad u muuqata, waxayna u muuqataa inay daboolayso lakabka ugu sareeya ee ciidda, taas oo ka hortageysa koritaanka haramaha iyo qallajinta ciidda.
Intaa waxaa dheer, ubaxa waxay ku kordhisaa hawada iyo hawada biyaha waxayna ku habboon tahay dib u soo kabashada dhulka.
Diyaarinta dhirta, ciidda iyo xaaladaha
Sida caadiga ah waxaa lagu beeray gooyn dhulka u furan oo ka yimaada baadiyaha qaangaarka ah ee caafimaadka qaba. Laakinse waa inaadan "dhejin" jir dil ah oo dhulka gashan, maxaa yeelay waxay si fudud u dhiman kartaa. First of dhan, geedo waa la diyaariyey - qaybaha waxaa laguula dhaqmaa dhuxul firfircoon ama ash, ka dibna jarida waxaa lagu hayaa xalka, taas oo kicinaysa koritaanka xididka.
Waxay soo baxday in jirida waa in laga soocaa kaniisada qaangaarka ah ee loogu talagalay saddex toddobaad ka hor intaan lagu beerin dhulka. Sida loogu talagalay dhirta qaangaarka ah, diyaarinta uma baahna, waxaa si taxaddar leh looga saaraa dheriga waxaana loo wareejiyaa meesha loo diyaariyey.
Carrada waxaa loo diyaariyaa sida soo socota:
Xilliga dayrta, halka qashinka Bacriminta macdanta waxaa laga dalbadaa ciidda, haddii ay jirto fursaddan oo kale, waxaad ku dari kartaa humus ka dibna qodo.
Ka hor inta laga beerto geranium ee dhulka u furan, ciidda acidified - waxaad u isticmaali kartaa qaarna, oxalic acid ama sulfate ferrous.
Ciidda waa in la siiyaa biyo fiican.
In dalool ah lagu dhigay layers: peat, ciid, ciid beerta. Haddii aadan kareyn kareyn sida isku darka ah ee dukaanka, waxaad iibsan kartaa diyaar u ah
Ceelka Geranium wuxuu ka qoday nidaamka xididka - Roots waa in si xor ah loo dhigaa. Waxaa intaa dheer, waxaa fiican in la doorto aag iftiin ah, laakiin qorraxdu si toos ah u dhici karto.
Shuruudaha u guurida dhulka
Beeridda dhirta la soo saaro ka dib khatarta ah barafoobay subaxdii, waxay ku saabsan tahay bartamaha ama dhammaadka May. Intaa waxaa dheer, waa suurad wacan in roobka ugu horeeya ee uu u gudbo - ciidda waa la jilciyaa qoyaan, iyo geranium si fudud u noolaan doonaa waqtiga ku habboon.
Haddii dariiqadu tahay mid kulul, cimilada qorraxda, waxay u fiicantahay in dib loo dhigo soo degitaanka subaxa hore ama fiidkii dambe.
Noocyada ugu haboon ee beerta iyo sawiradooda
Waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah dhirta this, laakiin inta u dhaxeeya bannaanka u socda soo socda waa mid caan ah.
Buundada cufan oo kori karta ilaa 1.2 mitir oo dherer ah. Waxaa ubaxu casaan-lilac, halka dhirta ay farxaan burooyinkeeda bartamihii xagaaga.
Dhaqankani wuxuu abuuraa qulqulo dabiici ah oo qoyan oo dhir ah oo ah 30 cm. Ubaxu wuxuu bilawdaa Juun, dhirta waxay sameysataa midab guduudan ama midab leh.
Dhaqanka wanaagsan ee sii kordhaya beerta. Dhiciddu waxay kacsan tahay, oo la dallacay illaa 70 cm oo dherer ah, waxay sameeyaan baadiyaha isku dhafan, baadiyaha, oo leh bilawga ubax bilaha bisha June.
Bush wuxuu koraa illaa 50 cm. Ciriiri ee tayada qurxinta, sida, sida ugu dhakhsaha badan ubbooyinku Bloom, midabka iyaga waa midab buluug ah, oo u dhaw deyrka ay u beddelaan midabkooda hooska leben.
Dhirta ayaa kor u kacda illaa 50 cm, caleemaha waa wareegsan, lugaha waaweyn, oo kori kara ilaa 10 cm.
Noocyada quruxda badan ee aan u baahnayn in loo wareejiyo dhulka hoostiisa jiilaalka, hal meel ah geedka ayaa dareemaya wanaag 12 sano. Noocaan noocan ah waa wax aan qabin xaaladaha cimilada. Warshad qurux badan oo baadiyaha ah inta lagu jiro ubax waxaa lagu daboolay ubaxyo guduudan.
Warshad qurux badan, ornamental ah oo leh burooyinkeeda double ee u eg dhufanayasaa. Cuncunka dilka ah ee koraya meel hal meel ka badan 15 sano, iyo waqtigaan oo dhan wuxuu uumi blooms ah iyo horumarin. Dhaqanka uma dulqaadanayo iftiinka qoraxda tooska ah wuxuuna ku haboon yahay meelaha ku yaal hooska.
Dhaqdhaqaaqa carrada by rhizome
Waxay badanaa dhacdaa in xilliga jiilaalka ka dib, geranium afkoda si adag loo soo saaray - waxay lumisaa muuqaal qurxoon. Waxaa jira meel ka baxsan - ku samee beerka dhulka hoostiisa, jarida dhammaan caleemaha, tegaayo 5-10cm xuddunta. Waxaad u baahan tahay inaad u dhaqanto sida soo socota:
Isticmaal qalab nadiif ah si aad u xoqdo germanyum.
Ka dawee qaybaha antiseptic.
Qoyso ciidda dheriga.
Diyaarso sariirta oo godad ku qoddo oo u dhigma xajmiga nidaamka xididka.
Si taxaddar leh uga saari jinka xajmiga leh ee kubada cagta.
Xidid xididada godka ku dhex daadi oo ku rusheey dhulka, xoogaa yareynaya ciidda agagaarka baadiyaha.
Ku shub biyo diirran.
Geedo of geraniums waxaa lagu beeray dhulka u furan bartamaha May.marka ay suurtogal tahay in dhaxan subaxnimadu ay yar tahay. Dhirta waxaa lagu beeray fogaan ah 10-20 cm midba midka kale ee sariirta diyaarsan oo si fiican u waraabiyey. Hore geedo 2 toddobaad ah pritenuyut qorraxdu si toos ah, waa in la raaco ka dibna ciidda beerta ma qalajin.
Haddii aad go'aansato inaad ku koraan geranium ka soo abuur, ka dibna waa inaad ka taxadartaa dhammaadka Janaayo, horraanta Febraayo, habka kaliya ee aad ku heli doonto geedka ubax xagaaga.
Si aad u abuurto abuurka aad u baahan tahay:
Diyaarso weelka geedo iyo ciidda ku habboon - waxaad ka iibsan kartaa dukaanka ciidda loogu talagalay geedo.
Qeybta hoose ee sanduuqa ku dul shub biyo fiican, ka dibna lakabka carrada.
Seeds waxaa loo qaybiyaa dusha sare fogaan ah 5 cm midba midka kale iyo rusheeyey lakabka yar ee dhulka.
Qoyso ciidda leh habka buufinta iyo qalab yar oo miraayad ah adigoo daboolaya sanduuqa leh bac quraarad.
2 asbuuc ka dib, caleemaha ugu horreeya ayaa soo muuqan doona, filimkan waqtigaan waa in laga saaraa oo weelka leh geedo leh geedo waa in la dhigaa meel diiran, oo dhalaalaya, laakiin aan lahayn qorraxda tooska ah.
Sida ugu dhakhsaha badan xilliga soo degitaanka dhulka u furan yahay ku habboon, geedo waxaa lagu beeray sidii hore lagu sharaxay.
Sidee loo wareejiyaa dheriga wadada?
Tixgeli sida loo abuurayo warshad dheriga ilaa dhulka. Marka dhan shaqo diyaar ah oo la sameeyo, waxaad bilaabi kartaa beerta germanyum ee dhulka furan. Marka transplanting ubax weyn weyn, rhizome waa pre-daweyn leh walax kicin. Waxaad iibsan kartaa dukaanka ubaxa, halka aad u baahan tahay inaad si aad ah u isticmaasho sida ku cad tilmaamaha. Qodobka waxqabadka marka la beerto geraniums ee dhul furan waa sida soo socota:
Dhulka waa in lagu qodaa si qoto dheer ah 35 cm.
U qaybi compost lakabka 10 cm ka weyn dusha sare ee sariirta qoday, iyo si fiican u qasi lakabka sare ee carrada.
Ceelku waa inuu ahaadaa qoto dheer - ugu yaraan 25 cm. Isla mar ahaantaana, dareenka waa in la siiyaa xididdada geedka.
Qeybta hoose ee daloolka dhigo isku dar ah peat, ciidda beerta iyo ciid - waxaad ka iibsan kartaa diyaar-dhigay dukaanka.
Si taxaddar leh uga saari dhirta dheriga, qaadashada daryeelka si aan u waxyeeleynin nidaamka xididka.
Ku rid xididdada geranium ee daloolka la diyaariyey oo ku rusheeyaa dhulka, waxoogaa yareynaya ciidda agagaarka baadiyaha.
Si caadi ah ku shub biyo diirran.
Marka la beero tiro dhir ah waa in la ilaaliyo masaafada u dhexeysa duurka - ugu yaraan 45 ilaa 60 cm, iyada oo ku xidhan nooca germanyum.
Waxyaabaha dheeraad ah ee ubaxa
Waa in isla markiiba muujiso in 14ka maalmood ee ugu horreeya ka dib markii lagu bedelay dhul furan oo geedku u baahan yahay in laga baxo qorraxda tooska ah, taas oo ah in la sariiro sariir la leh dhulka. Intaa waxaa dheer, waxaa lagama maarmaan ah in la ilaaliyo xeerarka soo socda ee daryeelka geedka geraniums ka dib markii lagu tallaalay:
Ka qaad caleemaha hareeraha duurka.
Heerkulka ugu fiican ee ciidda waa in ay ahaataa 15-20 digrii - ma noqon karo kululeyn iyo shuban.
Insecticides waa in loo isticmaalaa si looga hortago cayayaanka.
Xaalad kasta ha noqoto in caleemaha la buufiyo.
Dharka ugu sarreeya waxaa la sameeyaa 1 jeer laba toddobaad - si aad u dalbato Bacriminta macdanta.
Ka hor inta aadan fulin codsiga Bacriminta dareere ah. Geranium si fiican u waraabiyey - haddii kale waxaa jiri doona gubasho nidaamka xididka.
Haddii dhirta ay weli ku sugan dhulka loogu talagalay jiilaalka, ka hor inta dhaxan u baahan tahay in ay soo saaraan manjooyin - stem kasta waxaa gaabin by 5 cm.
Maxaa dhacaya haddii ay wax khaldan yihiin?
Haddii, ka dib beerashada, geedka bilaabay inuu daciifay on caleemaha, dhibco bilaabay inay u muuqdaan - laga yaabee geedka waxaa lagu dhuftay dulin cayayaanka. Xaaladdan oo kale, waxaa lagama maarmaan ah in lagu wareejiyo dhirta si loogu daaweeyo cayayaanka.
Waxaa jira xaalado marka, ka dib markii loo yaqaan 'Geranium transplant' xaaladaha cimilada caadiga ah, dhaxan ayaa dhacaya. Bedelida geraniums ee dheriga lama talin karo - culeys dheeraad ah ee geedka, wuxuu u horseedi karaa jirradiisa iyo soo kabashada dheer. Waa lagama maarmaan in la daboolo geedka. Xayawaanka ku wareegsan baadiyaha si aad u daboosho mulch, iyo walxaha daboolka.
Waxaa habboon in la ogaado in tallaabooyinka saxda ah iyo tallaabooyinka, kuwaas oo lagu talinayo in lagu fuliyo by growers ubax khibrad leh oo ku saabsan diyaarinta warshadda for transplantation iyo daryeelka dambe ee ka dib, wax dhibaato ah ma soo bixi doonaa. Waa in la fahmo in 2 toddobaad ee ugu horreeya ubaxa uu si gaar ah ugu nugul yahay cayayaanka, xajmiga heerkulka iyo xaaladaha ciidda, waxaad u baahan tahay inaad si fiican u daryeesho.
Geranium waa warshad caan ah oo dareensan labadaba ubax iyo ubax furan xagaaga. Geranium ee naqshadda muuqaalka ah ayaa la isticmaalay waqti dheer iyo ubax this si fiican u shaqeeyay sida dhirta ornamental, undemanding ee daryeelka.